ikhaya » Okufumaneka » Ukucwangcisa Uhambo lwenu kwiLu
Ukucwangcisa Uhambo lwenu kwiLu
NguJeff Rosica, uMongameli, Avid
Xa sazisa yethu Avid Nombono othile kwi-2013, le shishini lijongene nexesha lokungatshintshwa okwangaphambili. Ukukhangela ngokukhawuleza kwenkcubeko yexabiso leendaba kwenza kube nzima kubadali bezinto zokudibanisa ukuxhuma nokuzenzekelayo i-workflows, kunye nokwandisa indleko kunye nobunzima bempahla yokwenza imali. Ukusetyenziswa kwendalo kunye nokusabalalisa iminyanzelo yemibutho yezemidiya ukulungelelanisa nenyaniso entsha yokunciphisa ukulawulwa kwendlela abaphulaphuli basebenzisa ngayo umxholo. Ngexesha elifanayo, ukuncipha kwimithombo yengeniso yemveli kufuna ukuhlaziywa kwemodeli yoshishino kunye noxinzelelo olungapheliyo ekusebenzeni kakuhle kwinkampani ejongene nabantu abanqanyuliweyo, izixhobo kunye neefoworkwork
Le yimiba ephambili Avid Nombono kunye nesicwangciso esilungiselelwe ukulungisa kwi-2013. Kwaye ngoku, kwiminyaka emine nje kamva, ukuguqulwa kombono wethu ekufezekisweni kuphelile. Siye sakha i-platform yolwazi oluvulekileyo, oludibeneyo oludibeneyo nolulungekileyo olwenza ukuba imibutho yabezindaba idibanise ngokuthe ngempumelelo amaqela ahlukileyo kunye nokukhawuleza umsebenzi wabo wokusebenza. Kwaye ukunikezwa ngokutsha kunye nekhono lokwenza imali libanceda badibanise nabaphulaphuli babo kwiindlela ezininzi ezinamandla nangenzuzo kunanini ngaphambili.
Nangona kunjalo, njengentuthuko yezobuchwepheshe, iimingeni eziphuthumayo zomsebenzi kunye nemali zihlala. Uxinzelelo lokudala imiqulu ephakamileyo yamanqaku ephakamileyo aphezulu, kodwa i-bhajethi yezobuchwepheshe ayinyuli; baxakeka ukuze baqhubeke. Indawo yokuvelisa iLifa leMveli alinakuguquguquka okanye iphumelele njengoko kufuneka ukuba ilandele umthwalo kunye nokukhawuleza. Ukwandiswa kwamandla okusebenza kufuna iindleko ezixakekayo, eziqhelekileyo ezisebenzayo kunye nenkcitho-mali. Kwaye indawo yokuvelisa i-propati yenza ixabiso kakhulu kwi-hardware yendlu. Ukuqulunqa ingxaki, imibutho emininzi eyenziwe ngokugqithiseleyo i-hardware ye-hardware isisetyenziselwa ukusetyenziswa kwamashishini.
Izibonelelo zokuhambisa imveliso yemidiya efini
Ukwandisa imveliso yabeendaba kwifu-ngendlela ehambelana kakuhle neyona nto eyenzekayo yintsebenziswano-ivula ithuba lokuba zombini ukwandise amandla okuvelisa kunye nokunciphisa imithwalo yemali yokudalwa kwendalo kunye nokusabalalisa. Imibutho yemidiya ifumana i-permensing flexibility kunye nobuchule bezoshishino ukulungelelanisa izisombululo zabo zeteknoloji ezisetyenzisiweyo kunye neemfuno zendalo yazo. Baya kudibanisa kunye nokusebenzisana ukusuka naphi na, nokuba ngaba kusetyenziswa umsebenzi, i-laptop, okanye idivayisi yeselula-konke ngexesha lokwandisa ukusebenza kakuhle kuzo zonke iinkalo zecandelo lexabiso leendaba.
Ngoku imibutho yemidiya iyakhula i-viewership kunye ne-brand-affinity, idibanisa nabaphulaphuli babo ngeendlela ezintsha, kwaye ukhusele ngokugcwele impahla yabo ngokusebenza kwindawo ephephile. Kulula ukulinganisa izixhobo njengoko kufuneka ukuba zilungise ukuphakanyiswa kwemfuno, nokuba zikulindeleke okanye zingabikho, kwaye zithinte uqoqosho olukhulu lwamanani kumacandelo kunye namasebe.
Kwaye ukuguquguquka kunye nokunyaniseka kweenkonzo zefu kwenza ukuba imibutho yabezindaba ikhulise ixabiso lempahla yazo ngokunyuka kwiindawo ezitsha. Bayakwazi ukubuyisela izinto eziphathekayo ukuxhaphaza imithombo yamanzi engenayo kwaye bakhule ubuninzi bebhendi kwiindawo ezahlukeneyo zababukeli ngokwenza umxholo okhoyo kuwo wonke afuna ukuyidla, ingaba kwiTV, kwi-intanethi okanye kwisixhobo eselula.
Akumangalisi ukuba ukuvulwa Avid Umthengi (ACA) Vote, owanikezelayo Avidumphakathi wabathengi ithuba elingakaze lithinteke lokuchaphazela ngqo Avidiminikelo yexesha elizayo, ibonisa ukuba uninzi lwabaxhasi bezentengiso (71.7%) liqwalasela ukuhambisa inxalenye ethile yeziseko zabo okanye ukuhanjiswa kwemisebenzi kwilifu kwiminyaka emibili ezayo-eyona nto ibonakalayo yindlela yokusebenza yokufikelela ekude (15.8%). Nangona kunjalo, i-4.8 kuphela icinga ukuhambisa iziseko zayo zonke kunye nokuqhutyelwa komsebenzi kwifu, ekugqibeleni indima ebalulekileyo ukuba imodeli yokuthunyelwa kwamafu e-hybrid izakudlala kwikamva lezolimo.
Kunjalo ngoba Avid ihombisa imboni yamaphephandaba ukuba yenzeke imveliso yemidiya epheleleyo efini. Imibutho yeMedia ine-flexibility epheleleyo yokudala, ukusabalalisa, nokwenza imali ngomxholo wayo ngokusebenzisa uhlobo lokuthutha olusebenza kakuhle kubo-kwindawo, kwiziko leenkcukacha ezizimeleyo, ifu lomphakathi, okanye i-hybrid.
At Avid Xhuma i-2017, sazisa ukuba i-MediaCentral Platform ngoku inikwe amandla ngamafu, inika imibutho yemidiya, ukulungelelanisa, kunye nobuchule ukuhlangabezana nemingeni yokuvelisa imithombo yeendaba namhlanje. Ngokusetyenziswa kwezixhobo zabaxhasi, amajelo enkonzo, kunye neziseko kwiimfuno, banokusebenzisa iiplati, iinkonzo kunye nezicelo kwiindlela ezininzi eziguquguqukayo.
Iqabane elithembekileyo lokuguqula ifu
Ukuncedisa imibutho ngokuguquguqukayo kwimveliso yabo yemidiya efini, sazisa kwakhona ukuba sikhethe iMicrosoft Avidiqabane lomntu elikhethiweyo lomhlaba. Siza kusebenza kunye noMicrosoft ukubonelela ngezixazululo zefu ezinobuchule ezisebenza kwikhonsathi kunye Avid Izixhobo kunye neenkonzo zokusebenzisana kunye neenkonzo ezisetyenziselwa abathengi bethu.
Siye sakhetha iMicrosoft Azure njengeplani yethu yokubamba ifu ekhethiweyo ngoba iMicrosoft inikezela uluhlu olubanzi lokubamba amafu kunye noluntu lwenkonzo oluhlangabezana neemfuno kunye nohlahlo lwabiwo-mali lwenkonzo. Ngaphandle kweendawo ezikhuselekileyo zeenkcukacha ze-data, iMicrosoft inokunika imibutho yabezindaba uxolo lwengqondo ukuba impahla yabo ikhuselekile kwaye ikhuselekile ngaphaya kokufikelela kuyo nayiphi na ingozi. Naye Avid kunye ne-Microsoft yolwazi olubanzi nolwazi lwezobuchwepheshe, imithombo yeendaba iya kukwazi ukufuduka imithwalo yokusebenza yemveliso ekhoyo kwifulethi ngokwayo kunye neendlela zendlela ezintsha zokusebenza ngokufanelekileyo.
Njengoko imibutho yezobugcisa ijonge ukuxhaswa kwi-efficiency, ubukhali, ukuguquguquka, kunye nokusabalalisa ukuba ifu yenza kube lula, Avid Ulungele ukubanceda ekuhambeni kwabo. Kwaye kwi-IBC 2017, siza kubonakalisa ukuveliswa kwamafu kwaye sibonise indlela abanokuqonda ngayo iinjongo ezininzi zokuveliswa kweefayile ezisekelwe kumafu-ukusuka ekusebenzeni kakhudlwana kunye nobuchule kwi-chain value chain, kwiinkcitho ezincinci kunye neendleko eziphantsi.
Inkundla ye-Ultra HD	2017-09-04
Previous: Yenjineli yoVavanyo lwe-1
next: I-Bluefish444 ibonisa i-KRONOS Udidi lweeVidiyo, izandi, iiKhadi ze-I / O
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Cwangcisa Uhambo Lakho Emafu". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/planning-your-journey-to-the-cloud/. Enkosi.